ကျောင်းတွင်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ Linux မှ
ဒီနေ့မှာဆရာများအသုံးပြုနိူင်သောအခမဲ့အစီအစဉ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးပါမည် baccalaureateအထူးသဖြင့်areaရိယာ၌တည်၏ ကွန်ပျူတာ.
၎င်းသည်Barón Ashler ၏အလှူငွေဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အပတ်စဉ်ပြိုင်ပွဲ၏ဆုရရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။Linux အကြောင်းသင်သိသမျှကိုမျှဝေပါ«။ Baron Ashler ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။
3 GNU / Linux များ
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများရှိလူတိုင်းသိထားသည့်အတိုင်းပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဖယ်ဒရယ်စာရင်းစစ်အဖွဲ့များ၏ပိတ်ဆို့မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးသည်မူရင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင်၊ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခု၊ အခမဲ့၊ စျေးသိပ်မကြီးသော၊ စီးပွားဖြစ်ပရိုဂရမ်များနှင့်တူညီသောအရည်အသွေးရှိသည့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုလည်းရှိသည်။
၎င်းသည်ထုတ်ကုန်ကို ၀ ယ်ယူသုံးစွဲသူများအားလုံး၏လွတ်လပ်မှုကိုလေးစားသောဆော့ဝဲ၏အမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်တစ်ချိန်ကရရှိခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းကိုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ လေ့လာခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖောင်ဒေးရှင်း၏အဆိုအရအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အသုံးပြုသူများကိုလွတ်လပ်စွာ run ရန်၊ ကူးယူရန်၊ ဖြန့်ဝေရန်၊ လေ့လာရန်၊
Freedom 0: မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို program ကိုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုခွင့်။
Freedom 1: ပရိုဂရမ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုလေ့လာရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်၊ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်။
Freedom 2: အိမ်နီးချင်းကိုသင်ကူညီနိုင်သည့်ပရိုဂရမ်မိတ္တူများဖြန့်ဝေခွင့်။
Freedom3- ဒီအစီအစဉ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းနှင့်ထိုတိုးတက်မှုများကိုအခြားသူများအားလူသိရှင်ကြားဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ ရပ်ရွာတစ်ခုလုံးအကျိုးခံစားရစေရန်။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏နောက်ကွယ်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအားအပို ၀ န်ဆောင်မှုများကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည် - ၄ င်း၏စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခြင်း၊ နည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ လှူဒါန်းမှုများ၊ တံခါးပိတ်ရင်းမြစ်ဆော့ဖ်ဝဲအတွက်လိုင်စင် -based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်ဆန့်ကျင်သည်။
၎င်းသည် Linux kernel နှင့် GNU system နှင့်ဆင်တူသည့် Unix နှင့်ဆင်တူသောအခမဲ့ kernel (သို့) kernel များပေါင်းစပ်ရန်ရည်ညွှန်းသည့်အသုံးအနှုန်းများထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်၏အထင်ရှားဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ GPL (GNU အထွေထွေအများပြည်သူလိုင်စင်) နှင့်အခြားအခမဲ့လိုင်စင်များ၏စည်းကမ်းချက်များအရမည်သူမဆို၎င်း၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်များကိုလွတ်လပ်စွာ သုံး၍ ပြုပြင်၊ ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။
Linux သည် graphical environment နှင့် console mode နှစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ Console သည် server ဖြန့်ဝေမှုများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိပြီး graphical interface သည် home နှင့် business end အသုံးပြုသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ အလားတူပင်၊ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသော windows များ၊ အိုင်ကွန်များနှင့်အပလီကေးရှင်းများစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောပရိုဂရမ်များဖြစ်သော desktop ပတ်ဝန်းကျင်များလည်းရှိသည်။ GNU / Linux တွင်အကျော်ကြားဆုံးစားပွဲခုံများမှာ GNOME, KDE, LXDE, Xfce, E-17 စသည်။
အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအတိုင်းအတာအထိအသုံးမပြုခြင်းကြောင့်ဗဟုသုတမရှိခြင်းသည်လွှမ်းမိုးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ပညာရေးနယ်ပယ်တွင်အဓိကအားဖြင့်အထက်တန်းအဖွဲ့အစည်းများသည်အခြေခံကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘာသာရပ်များတွင် Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းမှတိုက်ရိုက် CD ကိုဘယ်သောအခါမျှအသုံးမပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်သည်အခြား operating systems များကိုသီအိုရီသက်သက်သာသာဖော်ပြရုံသာမက Windows, Office, C ++ compilers စသည်တို့ဖြင့်သာအလုပ်လုပ်ရန်ကန့်သတ်ထားသည်။
နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာပျင်းရိခြင်းဖြစ်သည်။ စီးပွားဖြစ်ပရိုဂရမ်များကိုအလုပ်တွင်အသုံးပြုသောကြောင့်၎င်းသည်ကျောင်းသားများ၏အလုပ်နယ်ပယ်တွင်အလုပ်မလုပ်ဟုသင်ထင်သောကြောင့်၎င်းတို့ကိုတိုက်ရိုက်စီဒီများဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်းမပြုပါ။ သို့သော်ဤနည်းအားဖြင့်လူငယ်များသည်ကွန်ပျူတာ၏အခြေခံအယူအဆများရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စကားလုံးပရိုဆက်ဆာများ၊ စာရင်းဇယားများနှင့်တင်ဆက်မှုများကိုဆလိုက်များဖြင့်သုံးသောဘာသာရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်အကြံပြုသောအကောင်းဆုံးအဖြေမှာသင်၏ LibreOffice ကိုသင့်ထံမှကူးယူခြင်းဖြစ်သည်။ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် သင်လိုအပ်သည့်စက်များ၌ထည့်ပါ။
ထိုနည်းတူစွာ၊ အကယ်၍ ကျောင်းသည်သင်၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ပြုလုပ်သော CorelDraw လိုင်စင်ရှိပါက vector ပုံဆွဲခြင်းဘာသာရပ်များအတွက် Inkscape နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ လုပ်နိုင် Download ပြုလုပ် သို့မဟုတ်သင် CorelDraw လိုင်စင်မရှိသည့်အခါ၎င်းသည်အဓိကဆော့ဝဲလ်အဖြစ်အသုံးပြုပါ။
အကယ်၍ သင်သည်အခြေခံကွန်ပျူတာဘာသာရပ်များကိုသင်ကြားသည်ဆိုပါက ISO ပုံရိပ်ကိုကူးယူပြီးထိုပရောဂျက်များထဲမှစီဒီသို့မဟုတ်ဒီဗီဒီကိုကူးယူရန်အကြံပြုသည်။
သင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည့်လုပ်ဆောင်ချက်များသည်စာသင်ခန်းအတွင်းရှိကျောင်းသားအရေအတွက်နှင့်စီဒီများပေါ်တွင်သင်သုံးစွဲလိုသောအရာပေါ် မူတည်၍ အားလုံးအတွက်ဖြစ်စေသုံးပုံနှစ်ပုံရှိနိုင်သည်။ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာ Linux လည်ပတ်မှုစနစ်၊ ဖြန့်ချိမှုများ၊ အားသာချက်များစသည်တို့ကိုမှတ်တမ်းတင်သုတေသနပြုရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျောင်းတွင်ကွန်ပျူတာအသုံးမပြုတော့သောပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါက၎င်းတို့သည်အလင်းဖြန့်ဝေခြင်းတပ်ဆင်ခြင်းအလေ့အကျင့်များပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဤစက်များကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည် Lubuntu o ခွေးကလေး Linux ကို.
ကာတွန်းရေးဆွဲရန်အကြောင်းအရာများအတွက်အခွင့်အလမ်းပေးပါ Synfig စတူဒီယို ၎င်းကို Flash ကဲ့သို့ကောင်းသောပရိုဂရမ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ကစားစရာများလာသည့်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများမှာ HTML စာမျက်နှာများဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ Notepad ဒါမှမဟုတ် web design software နှစ်ခုလုံးမှာသင်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုကိုလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ပထမရွေးစရာကိုသင်ရွေးချယ်ပါကလည်ပတ်မှုစနစ်အားလုံးတွင်ရိုးရှင်းသောစာသားတည်းဖြတ်သူပါ ၀ င်သောကြောင့်တရားစွဲဆိုခြင်းသည်ရာဇ ၀ တ်မှုမရှိပါ။ Dreamweaver လို application ကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် Bluefish ကိုစမ်းသုံးကြည့်ပါ။ ၎င်းသည် HTML စာမျက်နှာများကိုဖန်တီးရာမှာကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။ ဘာသာရပ်ကို PHP ပရိုဂရမ်းမင်းဖြင့်လည်းဖြည့်နိုင်သည် (download လုပ်ပါ။ ) XAMPPသင်၏အနာဂတ်စီမံကိန်းများတွင်သင်၏ယောက်ျားများအားအစေခံမည့်တက်ကြွသောစာမျက်နှာများပြုလုပ်ရန်။
အကယ်၍ သင်သည်ပရိုဂရမ်းမင်းကိုကြောက်လန့်နေပြီးဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်လိုလျှင်သင်စတင်လေ့လာခါစသူများအတွက်အကြံပြုထားသောရွေးချယ်စရာများမှာလွယ်ကူစွာ syntax syntax နှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဖော်ပြသော Python and Rubíတို့သည်သင်ယူရန်မြန်ဆန်ပြီး cross-platform ဖြစ်သည်။
သို့သော် အကယ်၍ သင်သည် C သို့မဟုတ် C ++ နည်းဟောင်းကိုသင်ကြားလိုသူများအနက်သင်ကလေးများကို Windows ရှိသကဲ့သို့သင်ကြားနိုင်သည်။ Gedit (သို့) Kate လိုပဲသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လွယ်ကူတဲ့ကုဒ်တွေကိုတည်းဖြတ်နိုင်တဲ့သင့်လျော်တဲ့ compiler နဲ့ text editor တစ်ခုကို install လုပ်ပါ။
ပရိုဂရမ်းမင်း၏အခြေခံများအနေနှင့်သင်သည် tool ကိုသုံးနိုင်သည် က DIA စီးဆင်းမှုကားချပ်များရေးဆွဲရန်နှင့်စက္ကူနှင့်ခဲတံအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်။
ကျွန်ုပ်၏တန်ဖိုးထားလေးစားရသောစာဖတ်သူများသည်အခြားနည်းလမ်းများကိုပေးထားသောကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအခွင့်အလမ်းပေးရန်၊ သူတို့ထံမှသင်ကစားနိုင်သမျှဂိမ်းများရယူရန်နှင့်ကန့်သတ်ချက်များသည်သင့်အပေါ်မူတည်နေကြောင်းသတိရရန်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » ကျောင်းတွင်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ
အလွန်ပျင်းရိသည်မှာထိုလူအုပ်စုတွင်ကျွန်ုပ်ပထမခံစားခဲ့ရသော်လည်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်အစတွင်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ငါ Free Sw (ဒါပေမယ့်မလုံလောက်ဘူး) အကြောင်းအများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီးအဲဒါကငါ့ကိုဆက်လေ့လာဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီအတွေးအခေါ် (ဒါကိုသင်ခေါ်ဆိုနိုင်ရင်) ကကျွန်တော့်အတွက်တံခါးတွေအများကြီးဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ ကွန်ပျူတာအတွက်ငါအရသာရှိတဲ့သူတွေကိုလူများစွာနဲ့တွေ့ဆုံစေခဲ့တယ်။
OScar Gonzalez ပြောခဲ့သလိုအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကမ္ဘာသည်မည်မျှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ကိုလူများနားလည်သဘောပေါက်ရန်အချိန်ရှိလိမ့်မည်!
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Flisol, Escom, IPN, ubuntu ရှိကွန်ပျူတာများကိုစာသင်ကျောင်းများကခွင့်မပြုပါ။ လွန်ခဲ့သောကျွန်ုပ်၏ကျောင်းများ၊ လူပျိုကြီးနှင့်လက်ရှိအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းများတွင်ကွန်ပျူတာများတွင် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုသာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိကျောင်းတွင် Ubuntu နှင့် Windows 64 bits ကို dual boot ဖြင့်တပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်အားကမ်းလှမ်းသည်။ ၎င်းတို့သည် 32GB ram နှင့် 8GB ပါသည့်ရိုးရှင်းပါသည်။ ပြတင်းပေါက်များကြောင့်အသုံးပြုခြင်းကိုမရ။ ကွန်ပျူတာ ၅၀ လုံးအတွက်၊ သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါ။ ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိချင်တာက၊ သူတို့လက်ခံမထားရင်တောင်ငါတို့တိုက်ခိုက်ရမယ်၊ တစ်နေ့ကျတော့ကျောင်းတွေနဲ့နေရာတိုင်းမှာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုပိုပြီးဖြန့်ဝေတော့မယ်။